Ogaden News Agency (ONA) – Shil baabuur oy ku dhinteen laba xubnaha OYSU/Koonfur Afrika ka tirsanaa
Shil baabuur oy ku dhinteen laba xubnaha OYSU/Koonfur Afrika ka tirsanaa
Waxaa goor dhaweyd naga soo gaadhay jaaliyadda qiimaha badan ee Koonfur Afrika –JOKA- shil naxdin leh oy ku dhinteen laba xubin oo ka tirsanaa ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya (OYSU) ee Koonfur Afrika.
Shilkan naxdinta leh oo ka dhacay gobolka Johannesburg ayaa waxaa ku dhintay Alaha u naxariistee laba dhalinyara ah oo magacyadooda kala ah;
1-	Maxamad Cabdulaahi
2-	Axmad Raasin
Waxaana ku dhaawacmay oo isbitaalka yaala C/rizaq Maxamad Dari.
Bahda Warfaafinta JWXO iyagoo ka wakiil ah dhamaan xubnaha ururka waxay tacsi u dirayaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen labadaa xubin. Waxaa kaloo aan tacsi uga diraynaa halkaa gudoomiuaha OYSU iyo djamaan xubnaha ururka. Inaa Lilaahi Wa-Inaa Ilayhi Raajicuun.
ayanhalgan gudomiyaha oysu ohio columbus says:
asalama caleykum waxaan halkan ka salamayh dhaman bahada webkan sido kale waxan rabah inan halgan ka diro tacsi ahmed raasii shiekh cumar iyo maxamed abdullahi oo ku geerayoday south africa waxan leyahay inalilahi waa ina ilahay raajucun waxaan dhahay samir iyo iman allah naga siiyo sido kale waxaan tacsidan u dirayah dhaman qosiski iyo eheladi aay ka dhashen iyo waliba shacabka somalida ogadenia meel kasta aay adunka ka joogan waxaan dhahay ilahay samir iyo iman ha naga siiyo waxay ku dhinteen difaca dalkoda iyo diintoda iyo dadkoda waxan huba ini qof walba tagayo meesha waa akhire sido kale waxaan ilahay caafimad taam aha oga baryanah abdirisaq maxamed salam by ayanhalgan